သူမလို အမှားမျိုး ပရိသတ်တွေ မမှားစေ ဖို့ အကြံပြုလိုက် တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း – Shwe Sar
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကတော့ ယနေ့ ထက်တိုင် ပရိသတ်တွေကြား နာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များနေတဲ့ အနုပညာရှ င်တ စ်ဦးဖြစ် ပြီး. . သူမဟာ နာမည်ကျော် အဆိုတော်အော င်လနဲ့အတူ သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို တည်ဆောက်ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တဲ့သူလေးလည်း ဖြစ် ပါတယ်။
နှစ်ယောက်စလုံး ဟာ အဆို ပညာ ပါရမီထူးချွန်လှလွန်းသူချည့်မို့ အရမ်းကို လိုက်ဖက်လှတဲ့ အဆိုရှင်စုံတွဲလို့ သတ်မှတ်ခြင်းခံ ထားကြရသူတွေလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဝိုင်းစုဟာ တစ်ချိန် က သီချင်း ဗီဒီယိုနှင့် ရုပ်ရှင်ကားများမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆော င်ခဲ့ဖူးသူတစ် ဦးဖြစ်ပြီး ခုချိန်မှာတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကို ရပ်နားထားပြီး သီချ င်းသီ ဆိုဖျော်ဖြေမှု အပိုင်းကိုသာ ပို၍ အလေးေ ပးကာ ဆက်တိုက်လုပ်ေ ဆာင်နေတဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်ဝိုင်းစုခိုင်းသိန်း ဘဝမှာ လည်း အားပေးနှစ်သက်သူတွေ များပြားခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း သူမဟာ သူမပို၍ ဝါသနာကြီးတဲ့ သီချင်းသီဆိုမှုအတွက် အဆိုတော်လို င်းကို အပြီးအပိုင် ကူးပြောင်းခဲ့သူ တစ်ဦး လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ဝါသနာနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု အသံကောင်းမွန်မှုတို့ကြောင့် အားပေးသူများပြားခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဘဝထက်ကို အဆိုတော်ဘဝမှာ ပို၍သာသော အောင်ြ မင်မှု မှတ်တိုင်တွေ စိုက်ထူနိုင် ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်လြာ ပန်ပါတယ်နော်။
လုပ်သမျှနီးပါး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အတွက် သူမဟာ စိတ်ချမ်း သာမှုနှင့် ပြီးပြည့်စုံသူလေးလို့ အားလုံး က ထင်မှတ်ထားချိန်မှာပဲ လူတစ်ကိုယ်မှာ အမှားတစ် မျိုးတော့ ပြုလု ပ်မိဖူးကြောင်း
သူမက သူမရဲ့ အကြော င်းလေးနဲ့ ယှဉ်ပြီး မီးမောင်း ထိုးပြကာ သံဝေဂစ ကားလေးတွေနဲ့ အားလုံးသတိထား ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
အစ်မသာ မဖြုန်းတီးမိရင် ဒီ့ထက်ပို အဆင်ပြေနေ မယ်လို့ Branded တွေဝယ်သုံး မိတဲ့အပေါ် သံဝေဂရမိတဲ့ အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
ဝိုင်းစုက “ကိုယ်ဖြုန်းခဲ့တဲ့ အရာတွေလည်းရှိတယ် ငယ်ငယ်တုန်းက လိုချင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့Brand တွေလျှောက်ဝယ် နောက်ဆုံးကျရင် အဲ့ဒါတွေက ဘာမှမဟုတ်ဘူး လက်ဝတ် လက်စား လိုနောက်ပို င်းပြန်ရောင်းလို့လ ည်းမရဘူး…..
Branded ကလည်း Updateအမြဲထွ က်နေတာ ဆိုတော့ ဒိတ်အောက်သွားရင် ကိုယ်လည်းမကိုင်ချင်တော့ဘူးလေ ပျက်စီးသွားမှာလည်း ဆိုးတော့ သူ့ကို ထိန်း သိမ်း ရတာလည်း အလုပ်တစ်ခြု ဖစ်နေတယ်.”လို့ ပြောပြလာခဲ့တာပါ။
သူမအနေနဲ့ ဒီလိုတွေမလုပ် ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီ့ထက်ပိုပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို ပိုလှူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သူမဖြုန်းတီးမိတာတွေကို သံဝေဂရမိတဲ့ အကြောင်းရ င်ဖွင့်လာခဲ့တြာ ဖစ်ပါတယ်။
”တချိန်လုံးဝယ်တယ် တချိန်လုံးသုံးတယ် ပြီးတော့ ဘာမှလည်း မကျန်ဘူးလို့သိလို က်တဲ့ အချိန်မှာ ဒါတွေကို ရပ်လိုက်တယ်….အမ ဒါတောင် အွန်လိုင်းကမှာ လို့ရ တာေ တွကို လျှောက်ဝယ်နေ မိသေးတယ်… ဒါပေမယ့်လည်း အခုတော့ အတော်ထိ န်းနိုင်နေပါပြီ” လို့ ရှင်းပြလာခဲ့တာပါ။
ဒါကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော် အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းက သူမရဲ့ ပြင်ဆ င်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အသုံးနဲ့အဖြုန်း လွဲမှားကျင့်သုံးမိခဲ့တဲ့ အမှား တစ်ခုကို ကြားသိရ သူတွေ ဆင်ခြင်သုံးသပ် သတိထား နိုင်​ဝေရန် အတွက် စေတနာတရားနဲ့ ရင်ဖွင့်စကား ဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ် ပါတယ်နော်။
ပရိသ တ်ကြီးလည်း ကိုယ့်ဘဝမှာ ဝိုင်းစုနဲ့ တိုက်ဆိုင် တာမျိုးရှိခဲ့ရင် အများသိကာ ဆင်ခြင်နိုင်စေဖို့ စေတနာရှေ့ထားပြီး မျှဝေကာ သတိပေးစကားလေးတွေ ဆို ခဲ့ကြ ပါအုန်းနော်။
နိုငျငံကြျော အဆိုတျောတဈဦးဖွဈတဲ့ ဝိုငျးစုခိုငျသိနျးကတော့ ယနေ့ ထကျတိုငျ ပရိသတျတှကွေား နာမညျကြျောကွားလူကွိုကျမြားနတေဲ့ အနုပညာရှ ငျတ ဈဦးဖွဈ ပွီး. . သူမဟာ နာမညျကြျော အဆိုတျောအော ငျလနဲ့အတူ သာယာတဲ့ အိမျထောငျရေးလေးကို တညျဆောကျပိုငျဆိုငျထားနိုငျတဲ့သူလေးလညျး ဖွဈ ပါတယျ။
နှဈယောကျစလုံး ဟာ အဆို ပညာ ပါရမီထူးခြှနျလှလှနျးသူခညျြ့မို့ အရမျးကို လိုကျဖကျလှတဲ့ အဆိုရှငျစုံတှဲလို့ သတျမှတျခွငျးခံ ထားကွရသူတှလေညျး ဖွဈပါ တယျ ။ ဝိုငျးစုဟာ တဈခြိနျ က သီခငျြး ဗီဒီယိုနှငျ့ ရုပျရှငျကားမြားမှာ ပါဝငျသရုပျဆော ငျခဲ့ဖူးသူတဈ ဦးဖွဈပွီး ခုခြိနျမှာတော့ သရုပျဆောငျပိုငျးကို ရပျနားထားပွီး သီခြ ငျးသီ ဆိုဖြျောဖွမှေု အပိုငျးကိုသာ ပို၍ အလေးေ ပးကာ ဆကျတိုကျလုပျေ ဆာငျနတေဲ့သူ တဈဦးဖွဈပါတယျ။
သရုပျဆောငျဝိုငျးစုခိုငျးသိနျး ဘဝမှာ လညျး အားပေးနှဈသကျသူတှေ မြားပွားခဲ့သူတဈဦးဖွဈသျောလညျး သူမဟာ သူမပို၍ ဝါသနာကွီးတဲ့ သီခငျြးသီဆိုမှုအတှကျ အဆိုတျောလို ငျးကို အပွီးအပိုငျ ကူးပွောငျးခဲ့သူ တဈဦး လညျး ဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ဝါသနာနဲ့ ကွိုးစားအားထုတျမှု အသံကောငျးမှနျမှုတို့ကွောငျ့ အားပေးသူမြားပွားခဲ့တဲ့ သရုပျဆောငျဘဝထကျကို အဆိုတျောဘဝမှာ ပို၍သာသော အောငျွ မငျမှု မှတျတိုငျတှေ စိုကျထူနိုငျ ခဲ့သူတဈဦးဖွဈလွာ ပနျပါတယျနျော။
လုပျသမြှနီးပါး အောငျမွငျခဲ့တဲ့ အတှကျ သူမဟာ စိတျခမျြး သာမှုနှငျ့ ပွီးပွညျ့စုံသူလေးလို့ အားလုံး က ထငျမှတျထားခြိနျမှာပဲ လူတဈကိုယျမှာ အမှားတဈ မြိုးတော့ ပွုလု ပျမိဖူးကွောငျး
သူမက သူမရဲ့ အကွော ငျးလေးနဲ့ ယှဉျပွီး မီးမောငျး ထိုးပွကာ သံဝဂေစ ကားလေးတှနေဲ့ အားလုံးသတိထား ဆငျခွငျနိုငျဖို့ ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။
အဈမသာ မဖွုနျးတီးမိရငျ ဒီ့ထကျပို အဆငျပွနေေ မယျလို့ Branded တှဝေယျသုံး မိတဲ့အပျေါ သံဝဂေရမိတဲ့ အကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ ဝိုငျးစုခိုငျသိနျး
ဝိုငျးစုက “ကိုယျဖွုနျးခဲ့တဲ့ အရာတှလေညျးရှိတယျ ငယျငယျတုနျးက လိုခငျြတဲ့စိတျတှနေဲ့Brand တှလြှေောကျဝယျ နောကျဆုံးကရြငျ အဲ့ဒါတှကေ ဘာမှမဟုတျဘူး လကျဝတျ လကျစား လိုနောကျပို ငျးပွနျရောငျးလို့လ ညျးမရဘူး…..
Branded ကလညျး Updateအမွဲထှ ကျနတော ဆိုတော့ ဒိတျအောကျသှားရငျ ကိုယျလညျးမကိုငျခငျြတော့ဘူးလေ ပကျြစီးသှားမှာလညျး ဆိုးတော့ သူ့ကို ထိနျး သိမျး ရတာလညျး အလုပျတဈခွု ဖဈနတေယျ.”လို့ ပွောပွလာခဲ့တာပါ။
သူမအနနေဲ့ ဒီလိုတှမေလုပျ ခဲ့ဘူးဆိုရငျ ဒီ့ထကျပိုပွီး လိုအပျတဲ့နရောတှကေို ပိုလှူနိုငျမှာဖွဈတယျလို့လညျး သူမဖွုနျးတီးမိတာတှကေို သံဝဂေရမိတဲ့ အကွောငျးရ ငျဖှငျ့လာခဲ့တွာ ဖဈပါတယျ။
”တခြိနျလုံးဝယျတယျ တခြိနျလုံးသုံးတယျ ပွီးတော့ ဘာမှလညျး မကနျြဘူးလို့သိလို ကျတဲ့ အခြိနျမှာ ဒါတှကေို ရပျလိုကျတယျ….အမ ဒါတောငျ အှနျလိုငျးကမှာ လို့ရ တာေ တှကို လြှောကျဝယျနေ မိသေးတယျ… ဒါပမေယျ့လညျး အခုတော့ အတျောထိ နျးနိုငျနပေါပွီ” လို့ ရှငျးပွလာခဲ့တာပါ။
ဒါကတော့ ပရိသတျအခဈြတျော အနုပညာရှငျ တဈယောကျဖွဈတဲ့ ဝိုငျးစုခိုငျသိနျးက သူမရဲ့ ပွငျဆ ငျနိုငျခဲ့ပွီဖွဈတဲ့ အသုံးနဲ့အဖွုနျး လှဲမှားကငျြ့သုံးမိခဲ့တဲ့ အမှား တဈခုကို ကွားသိရ သူတှေ ဆငျခွငျသုံးသပျ သတိထား နိုငျဝရေနျ အတှကျ စတေနာတရားနဲ့ ရငျဖှငျ့စကား ဆိုလာခဲ့တာပဲဖွဈ ပါတယျနျော။
ပရိသ တျကွီးလညျး ကိုယျ့ဘဝမှာ ဝိုငျးစုနဲ့ တိုကျဆိုငျ တာမြိုးရှိခဲ့ရငျ အမြားသိကာ ဆငျခွငျနိုငျစဖေို့ စတေနာရှထေ့ားပွီး မြှဝကော သတိပေးစကားလေးတှေ ဆို ခဲ့ကွ ပါအုနျးနျော။
စွဲမက်စရာကောင်း တဲ့ ကိုယ်လုံးလေးက ပေါ်လွင်နေတဲ့ အိချောပိုရဲ့ အမိုက်စား Tik Tok Video လေး
မဲရုံကိုသှား ဖွဈအောငျသှားဖို့ပွောတဲ့ကိစ်စမှာ အထငျအမွငျလှဲမှားနသေူတှကေို ပွနျလညျ ဖွရှေငျးလာတဲ့ ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျ
ခှဲစိတျမှု တဈခု လုပျရတော့မယျ့ “ဇာဇာထကျ”